တို့ဗမာ အစည်းအရုံး: အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းမှု ၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနှင့် မြေအောက်တော်လှန်ရေးသမား သခင်စိုး
အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းမှု ၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနှင့် မြေအောက်တော်လှန်ရေးသမား သခင်စိုး
ဧပြီလ (၂၈)ရက် …။
မန္တလေးအကျဉ်းထောင်အတွင်း အကျဉ်းကျနေကြသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သုံးရာကျော်ခန့်ပြန်၍လွတ်မြောက်လာကြသည်။ လွတ်မြောက်လာကြခြင်းက ဥပဒေနှင့်အညီ အုပ်စိုးသူ အာဏာပိုင်တို့က လွှတ်ပေးခဲ့ခြင်းမဟုတ် …..။ အုပ်စိုးသူအာဏာပိုင်တို့သည်လည်း `ဆင်းမလား`သို့ကိုယ်လွတ်ရုန်း၍ ဆုတ်ခွာခဲ့ကြလေပြီ။ အကျဉ်းထောင်အား ထောင်အာဏာပိုင်တို့၏လက်တွင် ၀ကွပ်၍ အပ်ခဲ့၏။ ထောင်ပိုင်ကြီးသည်လည်း စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးသို့ပြောင်းရွှေ့၍ စစ်ခိုရန်လုပ်နေ၏။ ဤတွင် ….နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့်ထောင်ပိုင်ကြီး ညှိနှိုင်းသဘောတူကြပြီး အကျဉ်းသားတို့လွတ်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သဘောတူမှုက နောင်တွင် ငွေ ၁၀၀၀၀ကျပ် ပေးပါမည်ဟူ၍ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့က နုတ်ကတိပေးပြီး လွတ်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ လွတ်လာသူများအထဲ၌ သခင်နု၊ သခင်စိုး၊ သခင်ကျော်စိန်တို့ပါ၏။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်လင်းယုန်နှင့် ရွှေတောင်တိုက်ပွဲတွင် သုံ့ပန့်အဖြစ် အဖမ်းခံခဲ့ကြရသည့် ဘီအိုင်အေရဲဘော်များလည်း ပါကြ၏။ မန္တလေးထောင်မှ လွတ်မြောက်လာကြသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၀၀ခန့်သည် အချို့က ပုသိမ်ကြီးဘက်သို့သွားကြ၏။ အချို့…ကပိုင်ရွာဘက်သို့သွားကြ၏။ သခင်စိုး၊ သခင်နု၊ သခင်ကျော်စိန် တို့က …..ကပိုင်ရွာသို့သွားကြ၏။ ကပိုင်ရွာတွင် တဲဝိုင်းကြီးများ ထိုး၍ ထောင်မှလွတ်လာသည့် အကျဉ်းသားတို့အား ကြီးပွားရေး ဦးလှ (လူထုဦးလှ)နှင့် ဒေါ်အမာ (လူထုဒေါ်အမာ) တို့က ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားကြ၏။
ကပိုင်ရွာတွင်ပင် သခင်နု၊ သခင်စိုး၊ သခင်ကျော်စိန်၊ ကိုဗဟိန်း၊ သခင်မြသွင်နှင့် တတ်ဖုန်းကြီးသိန်းဖေ (စာရေးဆရာသိန်းဖေမြင့်) တို့ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးကြပြီး တရုတ်ပြည်သို့ ချန်ကေရှိတ်တပ်နှင့် လိုက်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ တရုတ်ပြည်သို့သွားမည့်သူများမှာ သခင်စိုး၊ သခင်ကျော်စိန်၊ သခင်မြသွင်နှင့် တတ်ဖုန်းကြီးသိန်းဖေတို့ လေးယောက်ဖြစ်ပြီး သခင်နုကမူ ရန်ကုန်သို့ပြန်မည်ဖြစ်သည်။ ကိုဗဟိန်းမှာမူ မိဘများရှိရာ အင်းဝသို့ပြန်မည်ဖြစ်သည်။
ချန်ကေရှိတ်၏တပ်က စစ်ရှုံး၍ ဆုတ်သည့်တပ်ပီပီ ဆုတ်ခွာရာ လမ်းတစ်လျှောက်လူထုဆန့်ကျင်ရေးများပြုလုပ်၏။ ကပိုင်ရွာမှ တရုတ်တပ်နောက်လိုက်ခဲ့ကြသည့် သခင်စိုးတို့အဖွဲ့သည် ရွှေဘိုတွင် တရုတ်တပ်မကြီးနှင့်ဆုံ၏။ ဤတွင်ပင် တရုတ်စစ်သည်တို့က သခင်စိုးတို့လေးယောက်အား ဖမ်းဆီးလိုက်တော့သည်။ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုမှ တရုတ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအား ပြောဆိုရှင်းပြမှသာ သခင်စိုးတို့အား လွှတ်ပေးခဲ့၏။ သခင်စိုးက ကူမင်တန်တပ်အားကြည့်၍ စိတ်ပျက်နေတော့သည်။ ကူမင်တန်တပ်ဗိုလ်တို့က ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံရေးသဘောထားဟူ၍မရှိ။ စစ်သားများက စစ်ရှုံး၍ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားပြီး စစ်စည်းကမ်းဟူ၍မရှိ။ သေနတ်တရမ်းရမ်းနှင့်…..။ ဤအခြေအနေနှင့်လိုက်သွားပါက တရုတ်ပြည်သို့ပင် ရောက်မည်မဟုတ် ….။လမ်းတွင်ပင် သေဆုံးသွားနိုင်၏။ ဤသို့နှင့်သခင်စိုးသည် ရွှေဘိုမှာပင် ချန်ကေရှိတ်၏ ကူမင်တန်တပ်နှင့်လမ်းခွဲ၍နေခဲ့တော့သည်။ သခင်ကျော်စိန်တို့သုံးယောက်ကမူ ရေဦးအထိ လိုက်သွားခဲ့ကြသေး၏။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးအတွက် ပြည်ပသို့ထွက်ပြီး မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနှင့်အဆက်အသွယ်ရှာရန် တရုတ်ပြည်သို့သွားမည့်အစီအစဉ်အားဖျက်ခဲ့ရပြီးနောက် သခင်စိုးနှင့်တတ်ဖုန်းကြီးသိန်းဖေတို့သည် အိန္ဒိယသို့သွားရန် ဆုံးဖြတ်ကြ၏။ အိန္ဒိယသို့သွားမည့်သူများမှာ သခင်စိုး၊ တတ်ဖုန်းကြီးသိန်းဖေ နှင့်သခင်တင်ရွှေတို့ သုံးဦးသာဖြစ်ပြီး သခင်မြသွင်နှင့် သခင်ကျော်စိန်တို့မှာမူ မြန်မာပြည်အတွင်း၌သာ နေခဲ့ကြမည်ဖြစ်သည်။
နေမျိုးနွယ်တို့က မြန်မာ့မြေကြောဆုံးသည်နှင့်ပင် နေမျိုးနွယ်တို့၏လက်ဝါးက သာကီဝင်တို့၏ပါးပေါ်တွင် ခံတွင်းတွေ့၍လာတော့သည်။ ဤမှာပင် …..``ဘိရုမာနိပွန် အိုနာဂျီ`` (ဗမာ -ဂျပန်အတူတူပဲ) ဟူသော ဂျပန်စကား၏အဓိပ္ပာယ်ကို သာကီဝင်တို့သိလာကြရတော့သည်။
သခင်လူငယ်တို့က မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာကြရသည်။ ဖက်ဆစ်တို့အား ဆန့်ကျင်တော်လှန်လိုကြပြီ။ ရရာလက်နက်နှင့်စိတ်ထင်တိုင်းကြဲချင်၍ နေလေ၏။ ဘီအိုင်အေအတွင်း၌လည်း လူငယ်တပ်သားတို့က ဤအတိုင်းပင် ……။ သို့သော် …တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်ကား ဤသို့ စိတ်ဝေဒနာခံစားချက်နှင့်ထလုပ်၍ မပြီးမြောက်…..။ ပြင်ဆင်ရမည်။ လှုပ်ဆော်ရေးကာလ…။ စည်းရုံးရေးကာလ……၊ တော်လှန်ရေးကာလ……ဤသို့…..ထိုသို့…… စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ကြရမည်။ ဤအတွက် ခေါင်းဆောင်မှုက အရေးကြီး၏။ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများက လျို့ဝှက်လှုပ်ရှားကြရမည့်လုပ်ငန်းစဉ် များဖြစ်သည်။ မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဘီအိုင်အေတွင် စစ်သေနာပတိအဖြစ် တရားဝင် ခေတ်မှီမြန်မာ့တပ်မတော်ကို ဦးဆောင်၍နေရသည်။ ဂျပန်နှင့်နီးနီးကပ်ကပ်ပူး၍ တည်ရှိနေသည့်အခြေအနေမျိုး….။ ဗိုလ်ချုပ်မြေအောက်ဆင်းသွားသည်နှင့် ပြဿနာများက မိုးမဆုံး၊ မြေမဆုံး….ဖြစ်လာနိုင်မည်။ ဗိုလ်ချုပ်မြေအောက်ဆင်း၍မဖြစ်….။ဤတွင်လူငယ်ပိုင်းသခင်တို့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုအတွက် ခေါင်းဆောင်မှုအားရှာကြ၏။
… … … … … … ။
ရေနံချောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွင် သခင်တင်မြ သခင်တင်ဦးတို့နှင့်သခင်စိုးတွေ့၏။ သခင်စိုး၊သခင်တင်ရွှေနှင့်တတ်ဖုန်းကြီးသိန်းဖေတို့ တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်အားဖျက်ပြီး အိန္ဒိယသို့သွားရန် ထွက်လာစဉ် မကွေးသို့ရောက်၏။ မကွေးတွင် သခင်ဘသ်ိန်းနှင့်တွေ့ပြီး သခင်တင်မြနှင့်သခင်တင်ဦး ရေနံချောင်းတွင်ရှိနေကြောင်းသိ၍ သခင်စိုးမှ ရေနံချောင်းသို့လိုက်လာပြီး တွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်စိုးက လျိုဝှက်သွားလာနေခြင်းဖြစ်၍ ရုပ်ဖျက်ထားသည်။ တောကုန်သည် တစ်ဦးဟန်နှင့်သခင်စိုးအား သခင်တင်မြတို့ရုတ်တရက် မမှတ်မိကြ။ သခင်စိုး၊သခင်တင်မြနှင့်သခင်တင်ဦးတို့သည် ရေနံချောင်းအုပ်ချုပ်ရေးရုံးအပြင်ဖက်ဝင်းအတွင်းရှိ လျှိုကလေး၏ အစပ်မြက်ခင်းပေါ်၌ ထိုင်၍ ဆွေးနွေးကြ၏။
သခင်တင်မြနှင့်သခင်တင်ဦးတို့က သခင်စိုးအား အိန္ဒိယသို့ထွက်ခွာမသွားရန် ၊ပြည်တွင်းမှာပင် နေပြီးဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးအား ဦးဆောင်မှုပေးရန် ၊ခေါင်းဆောင်များအားလုံးပြည်ပသို့ထွက်ခွာသွားလျှင် ပြည်တွင်းရှိ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် ခေါင်းဆောင်မှုကင်းမဲ့နေမည့်အပြင် ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓါတ်ပြင်းပြနေသည့် လူငယ်နောက်လိုက်များနှင့်လူထုကိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်..။ ဟူ၍ သခင်စိုးအား အိန္ဒိယသွားမည့်အစီအစဉ်အား ဝေဖန်ကြ၏။ သခင်စိုးသည် အတန်ကြာငြိမ်သက်၍စဉ်းစားနေပြီး ……
``ဒီမှာ ကျနော်တို့ ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံးလုံခြုံရေး၊ လျှို့ဝှက်ရေးဟာ အဓိကပဲ။ လုံခြုံရေးမရှိရင် လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဂျပန်အဖမ်းခံ အသတ်ခံရပြီး လုပ်ငန်းလဲပျက်သွားမှာပဲ။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာ လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိသေးဘူး။ ဂျပန်ကိုမုန်းတဲ့ရွှံတဲ့လူရှိသလို သခင်တွေထဲက ဂျပန်နဲ့ဆက်ပေါင်းရမယ်ဆိုတဲ့ လူတွေရှိနေတယ်။ သတ္တိကြောင်နေတဲ့လူတွေ ရှိနေတယ်။ ဒီလူတွေကြားထဲမှာ ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်နေရင် အဖမ်းခံရမှာသေချာတယ်။ ဒါကြောင့်အချိန်လဲစောင့်ရင်း ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့လည်း ဆက်ရအောင် အိန္ဒိယသွားရမယ်။ အိန္ဒိယကနေပြီး ဗမာပြည်ထဲက ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ခေါင်းဆောင်ရမယ်။ နောက်အခြေအနေပြည့်စုံလာရင် ဗမာပြည်ထဲပြန်လာတာပေါ့။ ရပ်ရှားပြည်မှာလဲ လီနင်တို့ဟာ နိုင်ငံခြားကနေပြီး ရပ်ရှားပြည်ထဲက တော်လှန်ရေးကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တာဘဲ မဟုတ်လား `` …ဟူ၍ ဆင်ခြေပေးနေပြန်သည်။ သခင်တင်ဦးက …
``ဟုတ်ပါတယ် သခင်စိုး။ ကျနော်တို့လူငယ်တွေကတော့ ဂျပန်ပြန်ချဖို့အတွက်ဆိုရင် အသင့်ပါ။ တိုင်းပြည်လူထုကလည်း ဂျပန်ကို ရွှံမုန်းကြီးဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့လူထုကို စည်းရုံးရင်ရမှာပဲ။ ကျနော်တို့လူငယ်တွေကို ခေါင်းဆောင်မယ့်လူသာ လိုနေတယ်။ ခေါင်းဆောင်မယ့်လူသာ မရှိရင်တော့ ဂျပန်တွေစော်ကားတာ မခံနိုင်တာနဲ့ လက်ထဲရှိတဲ့သေနတ်တွေနဲ့ ထင်မိထင်ရာ ချမိကုန်မှာဘဲ ``
သခင်တင်ဦး၏စကားဆုံးလျှင် ….သခင်စိုးသည် တစုံတရာအား ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်ဟန်နှင့်…
`` ကဲ…. ကျနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီ။ ကျနော်အိန္ဒိယမသွားတော့ဘူး။ ဗမာပြည်ထဲမှာနေပြီး ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်။ ကိုသိန်းဖေနဲ့သခင်တင်ရွှေတော့ အိန္ဒိယရောက်အောင်သွားကြပစေ။ ဒီကိစ္စ သူတို့နဲ့တိုင်ပင်ကြမယ်။ သူတို့သဘောတူရင် ကျနော်နေခဲ့မယ်``
သခင်စိုးနှင့်သခင်တင်မြတို့သည် တတ်ဖုန်းကြီးသိန်းဖေ (စာရေးဆရာသိန်းဖေမြင့်) နှင့် သခင်တင်ရွှေတို့နှစ်ဦးအား အိန္ဒိယသို့သွားရန် ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့လေးအထိ လိုက်ပို့ခဲ့ကြပြီး ၁၉၄၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လလယ်တွင် ရန်ကုန်သို့ပြန်ခဲ့ကြသည်။ သခင်စိုးသည် ရန်ကုန်သို့ရောက်ပြီးနောက် မြေအောက်တော်လှန်ရေးအား စတင်ရန် ပြင်ဆင်တော့၏။ သခင်စိုးက မြေအောက်တော်လှန်ရေးအား ယခင်တို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သခင်ခေါင်းဆောင်များနှင့် စတင်၍လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းထက် ဖက်ဆစ်ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓါတ်ပြင်းပြပြီး တတ်ကြွနေကြသည့် လူငယ်လူသစ်များကို အမာခံအဖြစ်ထားပြီး စည်းရုံးလှုပ်ရှား၍ လှုပ်ရှားမှုကြီးအား ကြီးထွားကျယ်ပြန့်လာစေရန်ဆောင်ရွက်သွားမည်၊ ဟူ၍ သူ၏စည်းရုံးရေးမြေအောက်လှုပ်ရှားမှု မဟာဗျူဟာကို ချထား၏။
တနေ့….၊ထိုနေ့က ၁၉၄၂ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၂)ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ရွှေဂုံတိုင်ရှိ ဖုန်းကြီးကျောင်းတွင် သခင်စိုးနှင့်လူငယ်အချို့တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထား၏။ စီစဉ်ပေးသူက သခင်တင်မြဖြစ်သည်။ သခင်စိုးသည် မိုးကာအင်ကျီအား ၀တ်ပြီး ထီးကိုခပ်ငိုက်ငိုက်ဆောင်း၍ ကျောင်းဝင်းထဲသို့ဝင်လာ၏။ မိုးက သည်း၍ …..သည်း၍ …..။ သူနှင့်အတူ သူ၏ယောက်ဖ မောင်အောင်ထွန်းလည်းပါ၏။ မောင်အောင်ထွန်းက ကျောင်းအောက်မှ လူရိပ်လူခြေအား စောင့်ကြည့်ရန် ကျန်ခဲ့သည်။ သခင်စိုးသည် မိုးရေတို့နှင့်စိုရွှဲနေသော မိုးကာအင်ကျီအားချွတ်၍ ကျောင်းပေါ်သို့တတ်လာသည်။
သခင်တင်မြက သခင်စိုးနှင့်ကိုလှကြည်( ရဲနီကျော်ဝင်း) ကိုချစ်လှိုင် ၊ကိုမြသွင်တို့နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ သခင်စိုးက သူတို့သုံးယောက်ကို တစ်ဦးချင်းစီအား သေချာစွာစူးစိုက်ကြည့်ပြီး …
`` အရင်ထဲက ကိုလှသိန်း (သခင်တင်မြ၏လျှိုဝှက်အမည်) ပြောထား၍ နံမည်များကိုတော့ ကြားဖူးထားပြီး ဖြစ်တယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကို ယုံကြည်ပြီး အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓါတ်နဲ့ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓါတ်တွေ တတ်ကြွကြတဲ့အတွက် အားရမိတယ်။ `တို့ဗမာအစည်းအရုံး`ဟာ တစ်ကြိမ်က နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ တိုးတတ်တဲ့အခန်းက ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အခုအခြေအနေမှာတော့ `တို့ဗမာအစည်းအရုံး `ဟာ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ စည်းရုံးရေးတာဝန်ကိုခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိမယ့်အခြေအနေမှာ မရှိတော့ဘူးလို့ယူဆတယ်။ ဒါကြောင့်…..ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းကို ခေါင်းဆောင်ဖို့ဟာ နုပျိုသစ်လွင်တဲ့ အင်အားသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးတည်ဆောက်သွားရမှာပဲဖြစ်တယ်။ ဖက်ဆစ်ဝါဒဟာ ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်တာမှန်ပေမယ့် မခိုင်မြဲတဲ့အာဏာကို ပိုင်ထားတာပဲဖြစ်တယ်။``
သခင်စိုးသည် သူ၏စကားအား ခေတ္တရပ်ထားပြီး ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး မြေအောက်စည်းရုံးရေးတွင် လျှိုဝှက်ရေး သဘောထားများကို ဆက်၍ရှင်းပြနေပြန်သည်။
``ကျုပ်တို့ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေအပေါ်မှာ နောက်ဆုံးအောင်ပွဲဆင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ ပထမဦးစွာအားဖြင့် လျှို့ဝှက်ရေးကို စနစ်တကျ ကျင့်သုံးလိုက်နာရေးဘဲ။ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးသဘောတရား ဘယ်လောက်မှန်မှန် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း၊ စည်းရုံးရေးဘယ်လောက်ခိုင်မာခိုင်မာ၊ လျှို့ဝှက်ရေးကျင့်သုံးမှုကို စနစ်တကျမကျင့်သုံးနိုင်ရင် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေရဲ့ ချေမှုန်းမှုအောက်မှာ ကြေပျက်သွားနိုင်တယ်။ လျှိုဝှက်ကျင့်သုံးမှုဟာ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးမြေအောက်လုပ်ငန်းအတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ မလုပ်မဖြစ်တဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။ လူတွေအသက်ရှင်ရေးအတွက် ရေနဲ့လေကို အမြဲတမ်းလိုအပ်သလို ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး မြေအောက်လုပ်ငန်းအတွက်လဲ လျှိုဝှက်ကျင့်သုံးမှုဟာ ထာဝစဉ်လိုအပ်တယ်။ အဲဒါမရှိရင်၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒါကိုစနစ်တကျ လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမပြုရင် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး မြေအောက်လုပ်ငန်းဟာ သေသွားမှာပဲ။ ဒါကြောင့် ကျုပ်တို့ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး သမားတွေအတွက် လျှိုဝှက်ရေးဟာ ပထမ၊ လျှိုဝှက်ရေးဟာ ဒုတိယ။ လျှိုဝှက်ရေးဟာ တတိယ ဖြစ်တယ်။ ``
သခင်စိုးက မြေအောက်စည်းရုံးရေး၏လျှိုဝှက်ရေးမူအား မျက်လုံးအိမ်သဖွယ်စောင့်ထိန်းသူဖြစ်၏။ မစောင့်ထိန်း၍လည်းမဖြစ်….။ တစ်ချက်သတိမမူမိသည်နှင့် ဂျပန်ကင်ပေတိုင် (စစ်ပုလိပ်)တို့၏ ငရဲခန်းအတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးရလေမည်သာ ….။ေ၇ွှဂုံတိုင်ဖုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကိုလှကြည် (ရဲနီကျော်ဝင်း)တို့နှင့်တွေ့ပြီး ရန်ကုန်မှခွာတော့သည်။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ကျိုက်ထော်ရွာသို့လျှို့ဝှက်သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံရေးသင်တန်းတစ်ခုအား လျှို့ဝှက်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်၏။ သခင်တင်မြကိုမူ ရန်ကုန်တွင်ပင် ဆက်သွယ်ရေးအတွက် တာဝန်ယူရန် ထားခဲ့ပြီး သခင်စိုးနှင့် သခင်တင်မြအကြား ဆက်ဆံရန် ဆတ်သားအဖြစ် ကိုလှကြည် (ရဲနီကျော်ဝင်း) အား တာဝန်ပေး၏။
ကျိုက်ထော်ရွာ နိုင်ငံရေးသင်တန်းသို့ ကိုချစ်လှိုင်၊ ကိုမြသွင်၊ ကိုသာငြိမ်း (မိတ္ထီလာ) သခင်ချမ်းသိန်း (ကျောက်ဆည်) ၊ ကိုဝင်းဖေ (ကျောက်ဆည်) တို့တတ်ရောက်ကြသည်။ သခင်စုိးသည် နိုင်ငံရေးသင်တန်းအား တဖက်ကပေးရင်း …..သတ္တမအကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ကွန်မြူနစ်ပါတီများ၏ကွန်ဂရက်သို့တင်သွင်းသည့် `ဂျော့၊ ဒီမီထရော့` ၏ အစီရင်ခံစာ `` အလုပ်သမားလူတန်းစား၏ ဖက်ဆစ်ဝါဒ ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲ`` ဟူသောစာတမ်းအား ဘာသာပြန်၏။ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးတပ်သားများ လေ့လာနိုင်ရန် စာအုပ်ငယ်လေးအဖြစ် ထုတ်ဝေသွားရန်ဖြစ်သည်။ ကျိုက်ထော်ရွာ သင်တန်းပြီးသည်နှင့် သခင်စိုးသည် ကျိုက်ထော်မှ မှော်ဘီဘက်သို့ပြောင်း၏။ မှော်ဘီတွင် သခင်စိုးသည် ချောက်ရေနံမြေမှ သခင်အေးမောင် (အလံနီခေါင်းဆောင် ရဲနီထွန်းစိန်) တစ်ဦးတည်းအား နိုင်ငံရေးသင်တန်းပို့ချ၏။ မှော်ဘီတွင်သင်တန်းပေးရင်း သခင်စိုးသည် ``ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်းအမှတ် (၁)`` အား ရေး၏။ စာတမ်းက ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတမ်းဖြစ်သည်။ သခင်စိုးသည် ယခင်က အင်းစိန်ထောင်နှင့် မြင်းခြံထောင်များအတွင်း အကျဉ်ကျခံနေရစဉ်ရေးခဲ့သည့် ``အင်းစိန်စာတမ်းနှင့်မြင်းခြံစစ်တမ်း`` ဟူသည့် စာတမ်းနှစ်စောင်ကိုအခြေခံပြီး ပြောင်းလဲတိုးတတ်လာသည့် မျက်မှောက်နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးအခြေအနေများကို အခြေခံကာ ဖြည့်စွက်၍ ရေးထားသော စာတမ်းဖြစ်သည်။
ဖက်ဆစ်ဝါဒ၏စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးသဘောရုပ်ကို ဖက်ဆစ်ဝါဒကြမ်းကြုတ်ရက်စက်မှုများ ဖက်ဆစ်ဝါဒအင်အားကြီးမားဟန်ရှိသော်လည်း မခိုင်မြဲပုံများ၊ ဖက်ဆစ်ဝါဒသည် လွတ်လပ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒရေးတို့တွင် ရန်သူဖြစ်ပုံ၊ ဖက်ဆစ်ဝါဒကိုတိုက်ဖျက်နိုင်မှ လွတ်လပ်ရေးရနိုင်မည့်အကြောင်း ဖက်ဆစ်ဂျပန်များကို မောင်းထုတ်ရန် ပြည်သူလူထုကို မည်သို့စည်းရုံးရမည်၊ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး မြေအောက်ကလပ်စည်းများကို မည်သို့ဖွဲ့စည်းရမည်၊ စသည်တို့ကို အခန်းများခွဲခြား၍ ရေးသားထားလေသည်။
``လွတ်လပ်ရေးကို တိုက်ယူခြင်းခံထားရသော လူမျိုးသည် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကိုထူထောင်ရန် မပြောနှင့်…..ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအကြောင်း ပြောပင်ပြောနိုင်မည်မဟုတ် ``
သခင်စိုးသည် မြေအောက်တွင်နေရင်း ဗိုလ်လကျာ်နှင့်တစ်ကြိမ်….တွေ့ဆုံးခဲ့ပြီး တပ်တွင်း စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများအား ဆွေးနွေး၏။ ဆတ်သားမှတဆင့် စာအဆက်အသွယ်များကို မူ နှစ်ကြိ်မ်ခန့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်၏။ ဘီအိုင်အေ အား ဘီဒီအေသို့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးသည့်နောက်တွင် ဗိုလ်လကျာ်သည် တပ်များတည်ရာ ပျဉ်းမနားသို့ပြောင်းရွှေ့၍ နေခဲ့သည်။ ပျဉ်းမနားသို့ဗိုလ်လကျာ်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးနောက်တွင် သခင်စိုးသည် ဗိုလ်လကျာ်နှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်နေခဲ့သည်။ ဗိုလ်လကျာ်နှင့်ပြန်၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် သခင်စိုးသည် သခင်တင်မြအား တာဝန်ပေးသည်။ ပျဉ်မနား၌ ဘီဒီအေ တပ်ရင်း ၃-ရင်းရှိသည်။ တပ်ရင်း (၁)၊ တပ်ရင်း (၂)၊ တပ်ရင်း (၃)ဖြစ်သည်။ တပ်ရင်း (၁)တပ်ရင်းမှူးမှာ ဗိုလ်မှူးနေ၀င်းဖြစ်ပြီး ။ တပ်ရင်း (၂)နှင့်တပ်ရင်း(၃)တို့၏ တပ်ရင်းမှူးများမှာ ဗိုလ်မှူးရန်နိုင်နှင့်ဗိုလ်မှူးဇေယျတို့ဖြစ်သည်။ ငလိုင်ချောင်းအားမေးတင်ပြီး ပျဉ်းမနားရှိ ဘီဒီအေတပ်မှူးများ၏ နေအိမ်အဆောက်အဦးများအား ဆောက်ထား၏။ ဗိုလ်လကျာ်၏အိမ်က ကမ်းပါးထိပ်တွင်ဖြစ်ပြီး အုတ်ကြွတ်မိုးတိုက်အိမ်ငယ်ဖြစ်သည်။ သခင်တင်မြ ဗိုလ်လကျာ်၏အိမ်သို့ ရောက်သည့်အချိန်၌ ဗိုလ်လကျာ်သည် အိမ်တွင်မရှိ….။ တပ်များအား စစ်ဆေးရန် သွားနေသည်။ ဗိုလ်လကျာ်၏အိမ်၌ဗိုလ်ရန်အောင်အား တွေ့ရသည်။ ဗိုလ်ရန်အောင်က ရခိုင်ဘက်တွင်တာဝန်ယူနေရာမှ ကျန်းမာရေးမကောင်း၍ ပျဉ်းမနားသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ငှက်ဖျားပိုးဦးနှောက်တွင်းသို့ရောက်ခဲ့သည့်ဒဏ်ကြောင့် ဗိုလ်ရန်အောင်သည် ရောဂါပျောက်ကင်းခဲ့သော်လည်း လူက ခပ်ကြောင်ကြောင်ပင်ဖြစ်နေသေး၏။ နေ့ခင်းတစ်နာရီခန့်တွင် ဗိုလ်လက်ျာပြန်ရောက်လာ၏။ သခင်တင်မြက သခင်စိုးမှ ဗိုလ်လကျာ်သို့ရေးပေးလိုက်သောစာအား ဆေးပေါ့လိပ်အတွင်းလိပ်၍ထည့်ယူလာရာမှ ထုတ်ပြီးပေးလိုက်သည်။ ဗိုလ်လက်ျာသည် သခင်စိုးထံမှ စာအား အတန်ကြာဖတ်ပြီး စာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်သည်။ ပြီးမှ …..
`` သခင်စိုးဆီကို စာတော့ပြန်မရေးပေးတော့ဘူး။ နုတ်နဲ့ပဲ ပြောလိုက်မယ်။ သခင်တင်မြပဲမှတ်သွားပြီးပြန်ပြောပြပါ။ တပ်ထဲမှာ အခြေအနေပေးတာနဲ့ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး စည်းရုံးမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်သွားမယ်။ ဂျပန်တွေက ဘီဒီအေကို ဖွဲ့မပေးချင်ဘူး။ အခုဟာ မတတ်သာလို့ဖွဲ့ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် တပ်မတော်ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းကို အမြဲတမ်းအချက်ရှာနေကြတယ်။ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းမယုံဘူး။ အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတယ်။ ဒါကြောင့်…လောလောဆယ်ဆယ်မှာ တပ်မတော်တည်တံ့မှုကို ထိခိုက်စေမယ့်ကိစ္စတွေကို သတိထားပြီး၊ ရှောင်ပြီးလုပ်နေကြရတယ်။ ဒီအတွက် ….. တပ်ထဲမှာ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းကို ချက်ချင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်လို့မလွယ်သေးဘူး။ ပေါက်ကြားသွားတာနဲ့ဘီဒီအေကို ဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့အချက်ရသွားမယ်။ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော်တစ်ရပ် တရားဝင်တည်ရှိမှသာ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် အင်အားရှိနေမှာဖြစ်တယ်``
ဗိုလ်လကျာ်သည် သခင်စိုးထံသို့ စကားပါးလိုသည်အား အဆုံးသတ်လိုက်သည်။
၁၉၄၄ခုနှစ် ဧပြီလထဲတွင် …..
သခင်စိုးထံသို့သခင်သန်းထွန်းမှ စာတစ်စောင်အား ဆတ်သားနှင့်ပို့လိုက်သည်။ ဆတ်သားက ကိုကျော်ရင် (မန္တလေးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဟောင်း) ဖြစ်သည်။ စာက ….
``ကိုဗဟိန်းတစ်ယောက် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းကိုဇောက်ချလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် မြေအောက်သို့ဆင်း၍တာဝန်ယူလိုသည်။ သခင်စိုးမှ သဘောတူလျှင် စီစဉ်ပေးပါ `` ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ….ကိုဗဟိန်းသည် ဒေါက်တာဘမော်အစိုးရအဖွဲ့၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့တွင် အတွင်းဝန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက သခင်နုဖြစ်သည်။ သခင်နုပင်မသိလိုက်…..။ ကိုဗဟိန်းနှင့်သူ၏ဇနီးမခင်ကြီးတို့ နှစ်ယောက် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ရန် သခင်စိုး၏အစီအစဉ်နှင့် မြေအောက်သို့ဆင်းလာခဲ့ကြသည်။ ကိုဗဟိန်းတို့ဇနီးမောင်နှံအား ကိုကျော်ရင်မှ ကွမ်းခြံကုန်းအထိ လျှို့ဝှက်၍လိုက်ပို့သည်။ ကွမ်းခြံကုန်းမှ ဒေးဒရဲနယ်ရှိ သခင်စိုးရှိရာသို့ သခင်မြသွင်မှ ပို့ပေးခဲ့၏။
သခင်စိုးသည် မြေအောက်သို့ဆင်းလာခဲ့ကြသည့် ကိုဗဟိန်း၊သခင်ဗိုလ်၊ဦးကျော်ငြိမ်း (R.E.T) တို့အား ဒေးဒရဲနှင့်ကွမ်းခြံကုန်း -ကော့မှူးတို့တွင် လှည့်၍ နိုင်ငံရေးသင်တန်းအားပေးခဲ့သည်။ ကိုဗဟိန်းတို့သင်တန်းပြီးသည့်နောက်တွင် ရန်ကုန်ရှိ သခင်သန်းထွန်းဆီမှ သတင်းတစ်ခုဝင်လာသည်။ သတင်းက ….သခင်နုသည် ကုိုဗဟိန်းမြေအောက်သို့ဆင်းပြီးဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ရန်ထွက်သွားသည့်အပေါ် မကျေမနပ်ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ ကိုဗဟိန်းက သခင်နုနှင့်အတူ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနတွင်တွဲ၍ လုပ်နေသကဲ့သို့ နေသည်မှာလည်း သခင်နု၏ အိမ်တွင်ပင် နေသည်ဖြစ်၍ ယခုကဲ့သို့သူ့အား အသိမပေးခဲ့ပဲ သူ၏ အိမ်မှ မြေအောက်သို့ ဆင်းသွားသည့်အတွက် နောင်တွင် တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက သူ့အားပါတ်သတ်လာနိုင်သဖြင့် မကျေမနပ်ဖြစ်နေသည်ဟု သိရသည်။ ထို့အတွက် ….ကိုဗဟိန်းတို့ဇနီးမောင်နှံသည် မြေအောက်သို့ဆင်းခဲ့ပြီးပါမှ အခြေမပျက် ရန်ကုန်သို့ပြန်ပြီး သခင်နုအိမ်တွင် ခေတ္တပြန်နေ၍ သခင်နုအိမ်မှ အခြားအိမ်တစ်အိမ်သို့ ပြောင်းဆင်းခဲ့ပြီးမှ ဖြူးရှိ သခင်သန်းဖေတို့နှင့် ဆက်သွယ်ကာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် မြေအောက်သို့ပြန်ဆင်းကြရသည်။
၁၉၄၄ ခုနှစ် နွေနှောင်းကာလမှ စ၍ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးမြေအောက်လှုပ်ရှားမှုသည် ပိုမို၍ အားကောင်းလာခဲ့သည်။ သရက်ခရိုင်တွင် ခရိုင်ရဲဝန်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသော သခင်ဗသိန်းတင် (ဥက္ကဌ -ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ၊ကွယ်လွန်) သည် သခင်သန်းထွန်းမှ တဆင့် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွင် အချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်ရန် ဆက်သွယ်လာသည်။ သခင်သန်းထွန်းက သရက်မှ သခင်ဗသိန်းတင်အား ရန်ကုန်သို့ ခေါ်ယူ၍ သခင်စိုးထံသို့ ကိုကျော်ရင် နှင့်အတူ ပို့ပေးလိုက်သည်။ သခင်ဗသိန်းတင်နှင့်အတူ မရှေးမနှောင်းပင် အမျိုးသမီးစည်းရုံးရေးအတွက် တာဝန်ယူရန် အမရပူရမှ မစောမြ၊ ထားဝယ်မှ ကိုတင်ထွန်း၊ ၀ါးခယ်မသခင်သိန်းမောင်တို့လည်း သခင်စိုးရှိရာ `အင်းဂလုံးရွာ`သို့ ရောက်လာကြပြီး သခင်စိုးမှ သူတို့အား နိုင်ငံရေးသင်တန်း ပေး၏။ သင်တန်းပြီးသည့်နောက် ….. သခင်စိုးသည် သခင်ဗသိန်းတင်နှင့် ကိုတင်ထွန်း(ထားဝယ်) တို့အား ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးမြေအောက်စည်းရုံးရေးတာဝန်များအား ထမ်းရန် ထားဝယ်သို့ စေလွှတ်တာဝန်ပေးခဲ့၏။
၁၉၄၄ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုများ အကြား သတင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာ၏။ ပထမတွင် ခိုင်ခိုင်မာမာဟု ယူဆ၍ မရသေး….။ နောက်ပိုင်းတွင်မူ သတင်းအား အတည်ပြုလာနိုင်သည်။ သတင်းကား ….. ဘီဒီအေအတွင်းရှိ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီဝင်တပ်မှူးများက ဦးဆောင်ပြီး ဖက်ဆစ်ဂျပန်များအား လက်နက်ကိုင်၍တော်လှန်တော့မည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး မြေအောက်စည်းရုံးရေးအတွက် တပ်မတော်အတွင်း လျှိုဝှက်တာဝန်ယူနေသည့် ဗိုလ်သိန်းတန်ထံမှ သိရခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိုလ်သိန်းတန်က ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီဝင် တပ်မှူးများဖြစ်သည့် ဗိုလ်အောင်ကြီး ၊ ဗိုလ်မောင်မောင်တို့ထံမှ သိရခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်းက အရေးကြီးသည်။ တပ်မတော်က ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့အား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးချက်ချင်းထချလျှင် …..မည်သို့ဖြစ်လာနိုင်မည်နည်း။
သခင်စိုးသည် တပ်မတော်မှ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအား ချက်ချင်းထချမည့် အရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ စာတမ်းတစ်စောင်အားရေး၏။ ``လက်ဝဲသွေးစည်းအန္တရာယ်``ဟူ၍ဖြစ်သည်။ စာတမ်း၏သဘောကား ……
``လောလောဆယ်ဆယ် အခြေအနေမှာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်များကို ပြည်သူလူထုကြီးက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရန် အချိန်မကျသေး။ ဂျပန်ဖက်ဆစ်များသည် ပစိဖိတ်စစ်မျက်နှာ၌ ရှုံးနိမ့်နေပြီးဖြစ်သော်လည်း မြန်မာပြည်စစ်မျက်နှာတွင်စစ်အင်းအား ဆုတ်ယုတ်သင့်သလောက် မဆုတ်ယုတ်သေး။ ဖရိုဖရဲမဖြစ်သေး။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်၏အုပ်ချုပ်မှုမှာ ခိုင်မြဲနေဆဲဖြစ်သည်။ တဖက်က ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကိုဦးဆောင်တော်လှန်ကြမည့် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုများမှာလည်း တစုတစည်းတည်းမဖြစ်သေး။ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့များ၏ လူထုစည်းရုံးရေးမှာ မကျယ်ပြန့်သေးရုံမျှမက တကွဲတပြားစီဖြစ်နေသေးသည်။ ထိုကြောင့်ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့အား ချက်ချင်းလက်ငင်းလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရန် နိုင်ငံရေးအရ၊ စည်းရုံးရေးအရ၊ စစ်ရေးအရ အခြေအနေမပြည့်စုံသေး။ အခြေအနေမပြည့်စုံသေးပဲ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပါက အင်အားကြီးသော ရန်သူကို အင်အားနည်းနေသေးသော မိမိတို့က ချေမှုန်းပစ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ရာကျမည်။ တော်လှန်ရေးသမားများက မိမိတို့ကိုယ်ကို ရန်သူ့လက်သို့အပ်နှင်းရာကျမည်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကိုလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရန် အသင့်မဖြစ်သေးသောလူထုနှင့် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသမားများကို ကင်းကွာစေပြီး လူထုအကူအညီမရသဖြင့် ရှုံးနိမ့်မှုများကို ကြုံတွေ့နိုင်သည်။ ထိုကြောင့် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအဖို့ နိုင်ငံရေးအရ ၊ စည်းရုံးရေးအရ အသင့်မဖြစ်သေးမှီ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ကို ချက်ချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်ရန် သဘောထားသည် လက်ဝဲသွေဖည်ရေး အန္တရာယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤအန္တရာယ်ကို တားဆီးရမည်။ ဤလက်ဝဲသွေးဖည်ရေးသဘောထားရှိသူများကို ချဉ်းကပ်၍ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးကို စတင်ရန် အချိန်မကျသေးကြောင်း အချိန်စောင့်၍လိုအပ်သော နိုင်ငံရေး၊ စည်းရုံးရေးပြင်ဆင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြရမည်``ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ စာတမ်းအား မိတ္တူများကူး၍ ဗိုလ်သိန်းတန်မှတဆင့် တပ်မတော်အတွင်းသို့ဖြန့်ဝေခဲ့၏။
၁၉၄၄ခုနှစ် ။ သြဂုတ်လ (၄)ရက်။
သခင်စိုးရေးသည့် ``လက်ဝဲသွေးစည်းအန္တရာယ်``စာတမ်းအား တပ်အတွင်း ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးသည့်နောက် ….ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် သခင်သန်းထွန်းမှတဆင့် သခင်စိုးနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် ….တပ်မတော်က တသီးတခြား၊ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီက တမျိုးတဖုံ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီက တလမ်းတသွယ် လုပ်နေကြခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး လမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းပေါ်တွင် စည်းလုံးညီညွှတ်စွာနှင့် တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ရန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း၏။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရေးသဘောထားအား သခင်စိုးက သဘောတူလက်ခံ၏။ ဤတွင် လူချင်းတွေ့ဆုံ၍ ဆွေးနွေးရန် မြေအောက်တွင် ရောက်နေကြသည့် သခင်စိုး၊ ကိုဗဟိန်းတို့အား ပဲခူးရှိစံပြတပ်ရင်းသို့ လျှို့ဝှက်လာရောက်ရန် ဗိုလ်ချုပ်ကပင် စီစဉ်၍ တွေ့ဆုံကြသည်။
ပဲခူးရှိ စံပြတပ်ရင်း၌…. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်စိုးနှင့် ကိုဗဟိန်းတို့သည် ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး တပ်ပေါင်းစု အား ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြ၏။
၁၉၄၄ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၄)ရက် …(၅)ရက်….. (၆)ရက် …..။ ၃-ရက်တိုင်တိုင် ဆွေးနွေးပြီးနောက် …..
``ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့အဖွဲ့ချုပ်`` အား ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ခရီးလမ်းက ပိုမို၍ ကျယ်ပြန့်ကြီးမားလာခဲ့၏။ တပ်ပေါင်းစုနှင့် တော်လှန်ရေး၊ တပ်ပေါင်းစုနှင့်အောင်ပွဲခံရေးဆီသို့……။
`ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေးပြည်သူ့အဖွဲ့ချုပ်` အား စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၇-လကြာပြီးသည့်နောက် ….ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်စိုးနှင့် သခင်သန်းထွန်းတို့သည် ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်မှူးမြင့်အောင် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ) နေအိမ်၌လျှိုဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး အဖွဲ့ချုပ်အား တိုးချဲ့သွားရန် ဆွေးနွေးကြ၏။ လက်ရှိ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင် အရေအတွက်နှင့် နောင်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်နိုင်မည့်မဟုတ် ….သို့အတွက် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ အား တိုးချဲ့ရန်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များခွဲဝေ၍ လုပ်ဆောင်ကြရန်လိုကြောင်းဆွေးနွေးကြ၏။
၁၉၄၅ခုနှစ် မတ်လ (၁)ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ကန်တော်ကြီးစောင်းရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏နေအိမ်၌ `ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့အဖွဲ့ချုပ် ` တွင် ပါဝင်ကြသည့် အင်အားစု (၃)စုမှ ကိုယ်စားလှယ်များတွေ့ဆုံ၍ ဆွေးနွေးကြသည်။ `ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့အဖွဲ့ချုပ်` အား `ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် ` ဟူ၍ ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့အား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်မှူးကြီးလကျာ်၊ ဗိုလ်နေ၀င်း၊ ကိုဘဆွေ၊ ကိုကျော်ငြိမ်း၊ သခင်ချစ်၊ သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်တင်မြတို့နှင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ တာဝန်ခွဲဝေမှုတွင်
အလံတော်က …..အနီရောင်နောက်ခံပေါ်တွင် ….လက်ဝဲဘက်အထက်ဒေါင့်၌ ကြယ်ဖြူပွင့်ကြီး ….။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးက စလေပြီ…..။
``မိုးကုပ်ကုပ်ဝယ်၊ အို ….ရုတ်တရက်
မျဉ်းဖြူစက်၍ ၊ ကွဲအပ်ကြောင်းရာ
အာရုဏ်တတ်ပေါ်စ ၊ ၀ိုးတ၀ါး။``
-သိန်းဖေမြင့်၏ စစ်အတွင်းခရီးသည် (၁) ၊ (၂)
-သခင်တင်မြ၏ ဘုံဘ၀မှာဖြင့် အတွဲ (၁၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆)
- ဒဂုန်တာရာ၏ မတ်လတော်လှန်ရေးကဗျာ
- ၁၉၉၈ခုနှစ် မေလထုတ် မိုးဂျာနယ်တွင်ပါရှိသည့် သခင်လှကွန်း၏ မြင်ကွင်းသစ်ရှုခင်းသစ်များ
- ၁၉၉၇ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် မိုးဂျာနယ်တွင်ပါရှိသည့် ကျော်အောင်၏ အနီထဲက ကြယ်ဖြူပွင့်